Wararka Maanta: Arbaco, Nov 28, 2012-Al-shabaab oo Dhalinyaro ay ku eedeysay inay basaasiin yihiin ku qabatay Degmada Baardheere ee Gobolka Gedo
Labada dhallinyarada ah ayaa la qabtay iyagoo gaadiid ka raacay degmada waxay ciidammo ka tirsan Al-shabaab ku qabeen duleedka degmadaas iyagoo geeyay xabsi ay ku leeyihiin gudaha degmada Baardheere ee gobolka Gedo.
"Dhallinyarada waa kuwo deegaanka ku cusub oo aan muddo raadkooda ku joognay, waxaan uga shakisannahay inay yihiin jawaasiin, balse baaritaanno ayaa ku sameyn doonnaa," ayuu yiri mas'ulka u qaabilsan Al-shabaab degmada Baardheere, Barre Qooje oo la hadlyay Radi Andulus oo ku hadla afka Al-shabaab.
Sidoo kale, mas'uulku wuxuu sheegay in haddii uu dambi ku caddaado dabiga loo haysto waxaan marsiin doonnaa sharciga Islaamka; haddii dambiga lagu waayana waa lasii dayn doonaa.
Wararka laga helayo degmada Baardheere ayaa waxay sheegayaan in dhallinyarada la qabtay ay ku socdeen magaalada Muqdisho ayna ahaayeen arday wax ka baran jiray iskuullada degmada Mandheera ku yaalla, iyagoo dhowr maalmood ku sugnaa degmada Baardheere.
Xarakada Al-Shabaab oo ka talisa deegaanno badan oo ka tirsan Soomaaliya ayaa horay dilal ugu geystay dhallinyaro ay ku eedeeyeen inay basaasiin u yihiin Kenya, dowladda Soomaaliya iyo dalalka kale ee reer galbeedka.
11/28/2012 2:40 AM EST